Ukudluliswa - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Izinsizakalo zabafundiIzikhumulo Sezindiza
Ku-BLI, sifuna ukuthi ulwazi lwakho phesheya lube mnandi kusukela ngesikhathi ufika eCanada. Kwabanye abafundi, ukufika endaweni entsha kungacindezela. Ukuze ungakhathazeki nganoma yini, sinikela ngensizakalo yokuthatha eyenziwe yaba ngeyakho futhi enobungane. Omunye wabamele bethu uzokulanda futhi aqiniseke ukuthi ufika ngokuphepha endaweni yakho oyikhethile.
Uma udinga le sevisi, sicela usazise ngesikhathi sokubhalisa. Kubalulekile ukuthi usithumelele imininingwane yendiza yakho emasontweni amane ngaphambi kokufika kwakho ukuhlela insiza.
I-BLI futhi inikezela ngesikhumulo sezindiza yekela inkonzo. Ungacela le sevisi ngesikhathi sokubhalisa kwakho, noma uma ufisa ukuyicela uma usuvele eMontreal.
Izinsizakalo zabafundiUkufika endaweni yezindiza
Abafundi bamazwe aphesheya bafika ePierre-Elliott-Trudeau International Airport naseJean Lesage International Airport yaseQuebec City.
Lapho ufika esikhumulweni sezindiza, qiniseka ukuthi ulandela izimpawu esikhumulweni sezindiza. Kuzodingeka ukuthi udlule endaweni eyiPrayimari yokuHanjiswa kwabaHoli ukuze ukhulume nesikhulu esivela e-Canada Border Services Agency (CBSA).
Yilapho uzofuna ukubona ipasipoti yakho, Incwadi Yokwamukelwa, imininingwane ngendawo yakho yokuhlala kanye nethikithi lakho lendiza lokubuyela ezweni lakho.
Uma ufake isicelo semvume yokufunda ngoba uzobe ufunda izinyanga ezingaphezu kweziyi-6, kuzokhishwa imvume yakho yokufunda lapho ufika.